ကားချစ်သူများ ရဲ့ နှလုံးသားကို သိမ်းပိုက်ထားဆဲ.. Toyota Landcruiser..
မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ _ [Toyota Landcruiser](https://www.carsdb.com/my/brand-new/toyota/landcruiser)_ ကားသည် အထူးမိတ်ဆက်ပေးဖို့ မလိုလောက်အောင် ကား မောင်းသူအများစု သိကြသော ကားဖြစ်ပါသည်။ လန်ခရူဇာသည် တောကြမ်းလမ်းမောင်း (off-road) နှင်နိုင်အောင် ထုတ်လုပ်ထားသည့် [_SUV_](https://www.carsdb.com/my/used?fR%5Bbuild_type.name%5D%5B0%5D=SUV) ကားအမျိုးအစား ဖြစ်သော်လည်း လမ်းပေါ်တွင် ဇိမ်ခံကားတစ် စီးလို အသုံးပြုနိုင်သည့် ခန့်ညားလှပသော ကားတစ်စီးလည်းဖြစ်ပါသည်။ !(/redline/content/images/2017/09/Exterior-Land-1024x682.jpg) စွမ်းဆောင်ရည် [_Landcruiser_](https://www.carsdb.com/my/brand-new/toyota/landcruiser) ကားအင်ဂျင်မှာ ၄.၅ လီတာ၊ စလင်ဒါ ၈ ခုတပ်ဆင်ထားသော ဒီဇယ်အင်ဂျင်အမျိုးအစားဖြစ်ပါ သည်။ ဂီယာခြောက်ချက်ထိုး အော်တိုဂီယာဖြစ်ပြီး အမြင့်ဆုံး torque မှာ ၆၁၅ Nm ဖြစ်ပါသည်။ _ [Off-road](https://www.carsdb.com/my/used?fR%5Bbuild_type.name%5D%5B0%5D=SUV)_ မောင်းနှင်နိုင်အောင် တည်ဆောက်ထားပုံမှာ လန်ခရူဇာကား၏ အဓိကအားသာချက်ဖြစ်ပါသည်။ လမ်းပေါ် (သို့မဟုတ်) လမ်းကြမ်းများတွင် မောင်းနှင်သည့်အခါ တည်ငြိမ်အောင် လျှစ်စစ်စနစ်ဖြင့် ထိန်းညှိ ပေးသည့် Kinetic Dynamic Suspension စနစ်ကို တင်ဆင်ထားပါသည်။ ကျောက်တုံး၊ ရွံ့၊ သဲအစရှိ သည့် နေရာများတွင် မောင်းနှင်သည့်အခါ အခက်အခဲမရှိ ကောင်းမွန်စွာ မောင်းနှင်နိုင်ရန် သင့်အနေဖြင့် mode ၅မျိး (Rock; Rock and Dirt; Mogul; Loose Rock; and Mud and Sand) ကို စိတ်ကြိုက်ပြောင်းလဲနိုင် သည့် Multi-terrain select စနစ်ကိုလည်း ထည့်သွင်းထားပါသည်။ ထို့အပြင် တောင်တက်လမ်းများတွင် ကားစတင်ထွက်ခွာသည့်အခါ နောက်ပြန်လိမ့်မကျအောင် ထိန်းပေးသည့် hill-start assist နှင့် လမ်းကြမ်းများတွင် ချောထွက်သွားခြင်းမရှိအောင် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းပေးသည့် Off-Road Turn Assist စနစ်တို့ကို တပ်ဆပ်ပေးထားပါသည်။ ယာဉ်မောင်းသူ မမြင်ရနိုင်သော ကား၏ အချို့သော နေရာများ (အရှေ့၊ ဘေး၊ နောက်၊ အောက်) တွင် ကင်မရာများတပ်ဆင်ပေးထားပြီး ယင်းနေရာများကို ဖော်ပြပေးသည့် multi-terrain monitor စက်ကိုလည်း တပ်ဆင်ပေးထားပါသည်။ လန်ခရှုဇာကား၏ အမြင့်ဆုံးသယ်ဆောင် နိုင်သည့် ဝန်မှာ ပေါင် ၈၁ဝဝ ရှိပါသည်။ !(/redline/content/images/2017/09/Land-Cruiser-2016-Interior-22-1024x576.jpg) အတွင်းပိုင်း
လန်ခရူဇာကားတွင် အတန်း ၃ တန်းပါဝင်ပြီး လူ ၈ ဦးခန့် လိုက်ပါစီးနင်းနိုင်သည်။ ရှေ့ဆုံးတန်းခုံများတွင် ကားမောင်းရန် အကောင်းဆုံး နှင့် သက်သောင့်သက်သာ အနေအထားမျိုးဖြစ်အောင် ဆောင်ရွက် ပေးနိုင်သည့် power-adjustable driver seat and steering wheel ပါရှိပါသည်။ ရှေ့တန်းနှင့် ဒုတိယ တန်းခုံများသည် heated and ventilated seats များဖြစ်ရာ သင်၏ ကျောနှင့် ခြေထောက်နေရာများရှိ အပူချိန်ကို လိုသလို ထိန်းညှိ၍ ရပါသည်။ ကားမောင်းစဉ် အပြင်က သဘာဝအရသာကို ခံစားနိုင်အောင် sun roof ကိုတပ်ဆင်ထားပြီး ၉ လက်မအရွယ် touchscreen၊ ကြိုးမဲ့ အားသွင်းကြိုး၊ JBL အသံစနစ်၊ CD plyaer၊ USB input အစရှိသည်တို့ ပါဝင်သည်။ ထို့အပြင် ရှေ့တန်းခုံ၏ နောက်ဖက်တွင် ၁၁.၆ လက်မအရွယ်ရှိသော DVD player ဖန်းသား ပြင်ကိုလည်း တပ်ဆင်ထားရာ ခရီးသွားရင်း သင်နှစ်သက် သော ရုပ်ရှင် (သို့မဟုတ်) သီချင်းကို နားထောင်၍ ရသည်။ လန်ခရူဇာကားတွင် အရှေ့/အနောက်၊ ဘယ်/ညာဟူ၍ ဇုန်လေးဇုန် သတ်မှတ်ကာ အပူချိန်ကို လိုသလို ထိန်းညှိနိုင်သည့် နည်းပညာ အဆင့်အမြင့် လှသော air conditioning system ကို တပ်ဆင်ထားသည်။
တိုယိုတာ လန်ခရူဇာကားတွင် မောင်းနှင်နေစဉ် ချော်မထွက်သွားအောင် တာယာနှင့်၊ အင်ဂျင်တို့ကို အလို လျောက်ထိန်းသိမ်းပေးသည့် vehicle stability control စနစ်ကို တပ်ဆင်ပေးထားသည်။ အရှေ့နှင့် အနောက် ယာဉ်ရပ်နားခြင်းဆိုင်ရာ သတိပေး sensor များတပ်ဆင်ထားပြီး ရှေ့တန်းခုံ မျက်နှာစာရှေ့တွင် လေအိမ် ၂ ခု၊ အောက်ခြေ၌ လေအိတ် ၂ ခု၊ အရှေ့တန်းနှင့် အလယ်တန်းခုံဘေးများတွင် လေအိတ် ၄ ခု၊ ကားဘေးနံရံတစ်လျှောက်လုံးတွင် လေအိတ် တစ်ခု စုစုပေါင်း လေအိတ် ၉ ခုပါရှိသည်။ ထို့အပြင် mulit-terrain anti-breaking စနစ်ကို တပ်ဆင်ထားခြင်းကြောင့် အရေးပေါ်အခြေအနေတွင် သင်အန္တရာယ်မကျ ရောက်အောင် ကား၏ ဘရိတ်စနစ်ကို အလိုအလျောက် ထိန်းညှိပေးပါသည်။
ယခုကဲ့သို့ စွမ်းဆောင်ရည်ကောင်း၊ နည်းပညာမြင်သည် SUV အမျိုးအစားဖြစ်သော တိုရိုတာလန်ခရူဇာကားမှာ အခြားသော အမျိုးအစားတူ မည်သည် SUV ကားနှင်မဆို ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ပြီး ဝယ်ယူသူကားချစ်သူများအား စိတ်ကျေနပ်မှုအပြည့ပေးနိုင်သော ယာဉ်တစ်စီးဖြစ်ပါကြောင်း CarsDB မှ တင်ပြအကြံပေးအပ်ပါသည်။
လမ်းကြမ်းခရီးများအတွက်.. အပူအပင်မရှိ...ရုန်းကန်ပေးမည့်.. V8 အင်ဂျင်
အမြင့်မားဆုံးသော ခံစားမှုအတွက်... Landcruiser ကို မမေ့ပါနှင့်...
အပူးအက္ခရာ မဟုတ်သော တက္ကစီများ နံပါတ် အနက် ပြောင်းလဲမည်ဆိုလျှင် ပြည်ထောင်စု အစိုးရ အဖွဲ့၏ အတည်ပြုချက်ရယူရမည်